Sidee loo isticmaalaa qalabka raadinta ee tayada Google ee hooseeya?
Websaydhiyadu waxay isticmaalaan siyaabo kala duwan si ay u helaan juice juice website-yadooda. Mararka qaarkood, hababka ay ka fog yihiin kuwa sharciga ah. Dhamaan gadaalooyinka looma abuurin si isku mid ah. Sida badanaa dhacay, qaar ka mid ah xiriiradaada dibadda waxay noqon karaan kuwo qiimo leh oo si sax ah loo helaa, halka kuwa kale ay u muuqdaan tayad liidata ama aan la heli karin. Google
Google ayaa ka dhigaya dhamaan suurtagal u ah inay u suurtagasho milkiilayaasha bogagga inay ka saaraan xiriirkooda tayada liita oo ay ka baxsadaan cunaqabateyn. Qalabka Google-ga wuxuu noqonayaa hab wanaagsan oo loogu tala-galay ganacsatada internetka tan iyo markii uu Penguin casriyeysey. Laga soo bilaabo sannadkan 2012-kii Google Penguin ayaa soo cusbooneysiiyay raadin raadin mashiinka raadinta oo laga saaray dhammaan sifooyinka tayada liita ee shabakadaha gaarka loo leeyahay. Isla markaa waxay abuurtaa dhibaatooyin cusub oo si xun u saameeya dunida oo dhan SEO. Webmasters waxay bilaabeen inay isku dayaan inay ku xadgubaan nidaamkan iyaga oo abuuraya isbaaro dhab ah oo loogu talagalay goobaha maktabadda, iyagoo isku dayaya in ay hoos u dhigaan booskooda SERP. Qaar ka mid ah dadaalladan ayaa ku guulaystay. Magacyo badan ayaa saameeyay saamaynta xun ee tartamayaashooda. Waxay keentay baahi xooggan oo ah in la xakameeyo dhammaan isku xirnaanta bogga internetka. Taasi waa sababta Google go'aamisay in la abuuro qalab caawinaya Linking Tool si loo siiyo fursad ay leeyihiin milkiilayaasha bogagga si ay ula socdaan dhammaan xiriirkooda dibadda ah. Qalabkan raadinta backlinks ayaa ka caawiyay boqolaal kun oo mulkiilayaasha bogga inay xakameeyaan xaalada dhabarka.
Maxaan ugu baahannahay Google Google Qalabka Xiriirinta Xirfadaha?
Dhammaan nidaamka SEO-kumbuyuutarka SEO ayaa si xun u saameyn kara darajooyinka boggaaga iyo sumcadda, gaar ahaan tan Google ayaa caddaynaysa inay ciqaabayaan dhammaan goobaha ku lug leh spam kasta.
Waxaa jira milkiilayaal badan oo raba in ay si toos ah ula xiriiraan boggooda iyo waxay aaminsan yihiin in ay suurtagal tahay in la abuuro xiriir tayo oo tayo leh muddo hal ama laba maalmood ah. Dabcan, qof kastaa wuxuu awood u yeelan karaa in uu dalbado adeegga isgaadhsiinta spammy iyo inuu kumanaan dib-u-kicin ah dib-u-eego ilaha webka iyada oo aan wax dadaal ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay inay si xun u saameeyaan darajo kasta oo search engine ah. Ilahaaga shabakadda ma ahan inaad lumiso darajooyinka adoo adeegsanaya spam, hase yeeshee weeraro isdaba joog ah oo joogto ah ayaa si buuxda u burburin kara dadaalkaaga SEO.
Google Gardaro Xiriirinta Xiriirada waxaa si gaar ah loogu talagalay inay awood u siiso webmaster si ay u soo sheegaan oo u soo gudbiyaan xiriirada spammy hooseeya ee Google, iyo haddii ay ku dhufteen weerarrada spam ee ay ku dhexjiraan internetka tooska ah, taasi waxay ka caawineysaa inay ka baxso oo si dhakhso ah u nadiifi sumcaddooda.
Qalabka raadinta gadaasha Google ayaa ogaanaya xiriirada spam iyo website-yada kuwaas oo abuuraya, iyo xaaladaha intooda badan, kuma dhaawici doonaan darajooyinkaaga bogga. Si kastaba ha ahaatee, ilo webi badan oo wali ah ayaa wali saameeyn kara dhaqdhaqaaqyada been-abuurka ah, lambarkooduna waa sii kordhi doonaa cusbooneysi kasta oo Penguin ah.
Google ma qiimeyn doono backlinks meel kasta oo aad soo sheegatay hirgelinta Qalabka Khadka Google ah. Qalabkani wuxuu faa'iido u leeyahay matoorada raadiyaha iyo webmasters labadaba waxay ka caawineysaa in la ogaado qiimaha dhabta ah ee dhammaan ilaha webka iyo ciqaabta xukunka xukunka Source .